प्रेस रिभ्यू : भारतले छर्‍यो अर्को भ्रम, नक्सा पुनः संशोधन, बैंकिङ अपराधमा कर्मचारी प्रधानमन्त्री हुने हतारो छैन : प्रचण्ड « Pariwartan Khabar
प्रेस रिभ्यू : भारतले छर्‍यो अर्को भ्रम, नक्सा पुनः संशोधन, बैंकिङ अपराधमा कर्मचारी प्रधानमन्त्री हुने हतारो छैन : प्रचण्ड
23 November, 2019 7:37 am
उनी नआउँदै देशभित्र यो प्रश्न उब्जिएको छ, अब उनी के गर्लान् ? समाजवादीमा यसै विषयमा मतभेद सुरु भइसकेको छ । केही सरकार छाड्नुपर्ने तर्कमा छन् भने कतिपय अझै हेर्नुपर्ने धारमा छन् । समाजवादीका अर्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई तत्काल सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने पक्षमा छन् । तर, उपप्रधानमन्त्री यादव निकटले मन्त्रालय हेरफेर हुँदैमा सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने तर्क सही नभएको बताएका छन् ।